ဒီ website ဖြင့်လည်ပတ် Joopzy LLC မှ။ ဆိုက်တစ်ခုလုံးတွင်“ ငါတို့”၊ “ ငါတို့” နှင့်“ ငါတို့” ဟူသောဝေါဟာရများကိုရည်ညွှန်းသည် Joopzy.com. Joopzy.com ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များ၊ အခြေအနေများ၊ မူဝါဒများနှင့်သတိပေးချက်များကိုသင်လက်ခံခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှသတင်းအချက်အလက်၊ ကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှရရှိနိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှာစာများအားလုံးကိုတရုတ်မှတင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပို့သည့်အတိုင်းများများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါတို့မိသားစုကြီးထဲကိုဝင်ဖို့ပဲလိုတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှ တစ်ခုခုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်, သင်တို့၏ "ဝန်ဆောင်မှု" တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ( "သတ်မှတ်ချက်များကို", "of Service ကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ") ကိုအောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေအားဖြင့် ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူအဲဒီအပိုဆောင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်မူဝါဒများအပါအဝင် ဟိုက်ပါလင့်ခ်အားဖြင့်ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်းနှင့် / သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအကြောင်းအရာ browser များ, စျေးသည်များ, ဖောက်သည်များ, ကုန်သည်များ, နှင့် / သို့မဟုတ်မျှဝေသူ၌နေသောသူန့်အသတ်အသုံးပြုသူများအတွက်မပါဘဲအပါအဝင် site ၏အားလုံးအသုံးပြုသူများသက်ဆိုင်ပါသည်။
အပိုင်း ၁ - အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်သတ်မှတ်ချက်များ
အပိုင်း ၂ - အထွေထွေအခြေအနေ
သငျသညျအမြန်မပါဘဲကိုခွင့်ပြုချက်ရေးသားခဲ့သည်, မျိုးပွားပွား, မိတ္တူ, ရောင်းချ, ထို Service ကိုမဆိုအဘို့ကိုပြန်လည်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ် exploit, ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးသောမှတဆင့် website တွင်မဆိုအဆက်အသွယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမသဘောတူ ။
အပိုင်း ၃ - တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအချိန်ကိုက်
အပိုင်း ၄ - ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စျေးနှုန်းကိုပြုပြင်ခြင်း
အပိုင်း ၅ - ကုန်ပစ္စည်းများ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများ (ရှိလျှင်ရှိလျှင်)
အချို့သောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်သီးသန့်အွန်လိုင်းရနိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အရေအတွက်အကန့်အသတ်ရှိနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုအရသာပြန်လာသို့မဟုတ်လဲလှယ်နိုင်သည် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ.
ကျနော်တို့ညာဘက်ကြိုတင်ယူထားပေမယ့်မဆိုလူတစ်ဦး, ပထဝီတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်န်ဆောင်မှုများ၏အရောင်းကန့်သတ်ခြင်း, တာဝန်ရှိသည်ဟုကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကအမှု-by-ကိစ္စတွင်အခြေခံပေါ်မှာဤညာဘက်ကိုလေ့ကျင့်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းအားလုံးသည်ဖော်ပြချက်ကျွန်တော်တို့ကို၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာအသိပေးစာမပါဘဲသည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တားမြစ်ထားသောအဘယ်အရပ်ကဒီ site ပေါ်တွင်လုပ်မဆိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မဆိုကမ်းလှမ်းမှုပျက်ပြယ်သည်။
အပိုင်း ၆ - ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်စာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏တိကျမှု
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုသို့မဟုတ်အမိန့်တစ်ခုစီအတွက်ဝယ်ယူထားသောပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည်တူညီသော ၀ ယ်သူ၏အကောင့်၊ သို့မဟုတ်တူညီသောခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် / သို့မဟုတ်တူညီသောငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပို့ခြင်းလိပ်စာကိုအသုံးပြုသောအမိန့်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် (သို့) အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းလျှင်၊ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချိန်တွင်ပေးသောအီးမေးလ်နှင့် / သို့မဟုတ်ငွေတောင်းခံသည့်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကုန်သည်များ၊ ပြန်လည်ရောင်းချသူများသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးသူများကပေးသောအမိန့်များကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်တားမြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏စတိုးဆိုင်မှာလုပ်အားလုံးဝယ်ယူမှုများအတွက်, လက်ရှိပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အကောင့်အချက်အလက်များကိုသဘောတူသည်။ သငျသညျချက်ချင်းငါတို့သည်သင်တို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်အောင်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲများအပါအဝင်သင့်အကောင့်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ update လုပ်ဖို့သဘောတူသည်။
အပိုင်း ၇ - ရွေးချယ်စရာကိရိယာများ
အပိုင်း ၈ - တတိယမြောက်ကဏ္Lများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောအချို့သောအကြောင်းအရာများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တတိယပါတီမှပစ္စည်းများပါဝင်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်အခြားတတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအရောင်းအ ၀ ယ်များ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ထိခိုက်မှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တတိယပါတီ၏ပေါ်လစီများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသေအချာပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးမည်သည့်ငွေပေးငွေယူကိုမဆိုသင်နားလည်ကြောင်းသေချာပါစေ။ တိုင်ကြားမှုများ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ စိုးရိမ်မှုများ (သို့) တတိယပါတီထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကိုတတိယပါတီသို့ပေးပို့သင့်သည်။
အပိုင်း ၉ - အသုံးပြုသူမှတ်ချက်များ၊ ပြန်လည်ပေးပို့ချက်နှင့်အခြားတင်ပြချက်များ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုချက်အရသင်သည်တိကျသောတင်ပြချက်များ (ဥပမာအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းများ) ကိုပေးပို့လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတောင်းဆိုမှုမပါဘဲဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ အဆိုပြုလွှာများ၊ အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းမှအီးမေးလ်ဖြင့်၊ စာတိုက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ (စုပေါင်း၊ 'မှတ်ချက်များ')၊ သင်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သောမည်သည့်မှတ်ချက်ကိုမဆိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုသင်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ချက်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာထိန်းသိမ်းထားရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ (1) မည်သည့်မှတ်ချက်များအတွက်လျော်ကြေးငွေပေးချေရန်, သို့မဟုတ် (2) မည်သည့်မှတ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်။
အပိုင်း ၆ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
အပိုင်း ၁၁ - အမှားများ၊ တိကျမှုများနှင့်ပျက်ကွက်မှုများ
ကျနော်တို့ဥပဒေဖြင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ် မှလွဲ. သတင်းအချက်အလက်ရောင်းစျေးသတ်မှတ်, န့်အသတ်မရှိဘဲအပါအဝင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ် website တွင်သတင်းအချက်အလက်, ကို update ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းရန်မတာဝန်ဆောင်ရွက်ရန်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအတွက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ် website တွင်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသတ်မှတ်ထားသော update များသို့မဟုတ်ရဲ့ Refresh နေ့စွဲလုပ်ငန်း၌ဖြစ်စေမည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ် updated ထားပြီးကြောင်းညွှန်ပြခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။
အပိုင်း ၁၂ - တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုမှုများ
အပိုင်း ၁၃ - အာမခံချက်ကိုငြင်းဆိုခြင်း၊ တာဝန်ဝတ္တရား၏ကန့်သတ်
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့) မသုံးနိုင်ခြင်းတို့သည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောစွန့်စားမှုဖြစ်သည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သင့်အားပေးအပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကို (ကျွန်ုပ်တို့မှဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှ လွဲ၍) မည်သည့်ကိုယ်စားပြုချက်၊ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သွယ်နိုင်မှု၊ ကုန်သည်အရည်အသွေး၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြံ့ခိုင်မှု၊ ကြာရှည်ခံမှု၊
joopzy.com သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အမြတ်အစွန်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊ ငွေစုဆောင်းခြင်း၊ အချက်အလက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်များသို့မဟုတ်အလားတူထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအပါအ ၀ င်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုဆက်စပ်သည့်အခြားပြောဆိုမှုများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်မည်သည့်မျိုးကိုမဆိုဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်တင်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း (သို့) အခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်) ကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြံပေးလျှင်သော်မှဖြစ်စေ၊ အချို့သောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည်ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်အကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်မတော်တဆထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုချန်လှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းများကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားသည်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိကန့်သတ်ထားရမည်။
အပိုင်း ၇ - လျော်ကြေး
အကျိုးတူပူးပေါင်းသူများ၊ မိတ်ဖက်များ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်လာသောရည်ညွှန်းမှုသို့မဟုတ်ဥပဒေသို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏အခွင့်အရေးများအားချိုးဖောက်ခြင်းတို့ကြောင့်တတိယပါတီမှပြုလုပ်သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေများပါဝင်သည်။
အပိုင်း ၁၅ - ခွဲစိတ်နိုင်စွမ်း
အပိုင်း ၁၆ - ရပ်စဲခြင်း
အပိုင်း ၈ - တစ်ခုလုံးသဘောတူညီချက်
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှတင်ပြသောမည်သည့်မူဝါဒများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစည်းမျဉ်းများသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားနားလည်မှုတစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်၊ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြား (၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များပါ ၀ င်သောမူများအပါအ ၀ င်) ကန့်သတ်မထားပါ။
အပိုင်း ၉ - အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသီးခြားသဘောတူညီမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုယူအက်စ်ဥပဒေများနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ရမည်။
အပိုင်း ၁၉ - ၀ န်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များကိုပြောင်းလဲခြင်း
အပိုင်း ၁၁ - ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်